China TDY-Y-1 Tabilaon'ny fiasan-damba elektrika-Hydraulika maro any China mpanamboatra sy mpamatsy | Wanyu
Ny fototra miendrika Y dia miantoka ny fitoniana sy ny habaky ny tongotra.
Ny fiasan'ny fandikan-teny sy ny takelaka fandriana azo jerena, miaraka amina C-arm, dia afaka manao scanner amin'ny taratra X amin'ny vatana iray manontolo.
Ny rafitra fanaraha-maso roa, ankoatry ny fanaraha-maso lavitra, dia misy rafitra fanaraha-maso vonjy taitra. Ny lahasa fanalahidy tokana dia manome ny fahombiazan'ny asan'ny dokotera.
Ity latabatra fandefasana elektro-hydraulic ity dia mety amin'ny fandidiana isan-karazany, toy ny fandidiana kibo, ny fiterahana, ny fiterahana, ny ENT, ny urology, ny anorectal ary ny orthopedics, sns.
1.Rafitra fanaraha-maso indroa
Ny latabatra fiasan'ny TDY-Y-1 Electric-Hydraulical dia manana fomba fifehezana avo roa heny, ny iray dia mifehy tariby, miaraka amina famerenana ambaratonga mandeha ho azy. Ary ny iray hafa dia ny rafitra fanaraha-maso vonjy taitra. Rafitra miasa mahaleo tena roa miaraka amina fiasa iray ihany no miantoka fa ny rafitra fanaraha-maso vonjy taitra dia mbola afaka miasa azo antoka rehefa tsy mahomby ilay mpandrindra tariby, miantoka ny fampiasana azo antoka ny latabatra fandidiana.
Azo alaina amin'ny Scan X-ray
2.A azo ampiasaina amin'ny Scan X-ray
Ny latabatra ambony latabatra elektrika-hydraulic OR dia afaka mandalo taratra X, ary apetraka eo ambanin'ny latabatra ny lalamby fitarihana hitaterana boaty sarimihetsika taratra X-ray
3.Mifanaraka amin'ny C-arm
Ny lozam-pifamoivoizana mijidina elektrika dia 340mm, izay manome toerana fametrahana toerana marina sy mety ho an'ny C-arm, ary afaka manao taratra X-vatana iray manontolo nefa tsy mihetsika ny marary.
4. bateria azo haverina
Ny latabatra fandidiana TDY-Y-1 Electric-Hydraulical dia misy batterie azo averina avo lenta, izay afaka mifanaraka amin'ny filan'ny ≥50 fiasa, miantoka ny fiasana tsy misy famatsiana herinaratra ivelany. Ny bateria azo averina indray dia tsy mila fikojakojana ary azo ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra. Mandritra izany fotoana izany, ny herin'ny AC dia azo ampiasaina hanomezana angovo elektrika hiantohana ny fiarovana azo antoka.
5.One-bokotra Reset Fhosotra
Ny fiasan-tsindry bokotra iray vaovao dia manamora ny asa sarotra
Model item TDY-Y-1 Tabila fiasan'ny herinaratra-hydraulic
Ny halava sy ny sakany 1960mm * 500mm
Fiakarana (ambony sy ambany) 1090mm / 690mm
Takelaka lohany (ambony sy ambany) 60 ° / 85 ° / 0 °
Takelaka fikirakirana tsy voatery
Bokotra fijanonana vonjy maika tsy voatery
6 Takelaka tongotra Tsiroaroa 1
7 Tanana amin'ny tetezana voa Sombiny 1
8 kidoro 1 Mametraka
9 Fixing Clamp Sasa 8
Previous: LEDD730 Ceiling Mounted LED Fahazavana fandidiana tokana miaraka amin'ny sandry vita amin'ny aliminioma
Manaraka: TDY-1 China Electric vidin'ny latabatra fandidiana ho an'ny hopitaly
Fitaovana fandidiana hopitaly TDY-Y-2 Electro-Hyd ...